စိတ်ပျောက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စိတ်ပျောက်ခြင်း
Posted by Wow on Jun 27, 2012 in Creative Writing | 27 comments
By Wow စိတ်ပျောက်ခြင်း
အခုတစ်လော ကြာဘီ တစ်လလောက်ရှိဘီ။ အရင်းရှင်ဒွေများရက်စက်ချက် ပရောဂျက်သုံးခုလောက်ကို သာမီးတစ်ယောက်ထဲ လုပ်ခိုင်းဒယ်… ဟီး…ဟီး…ဟီး (ငိုနေဒါ)
အင်တာနက်လဲ နပ်မှန်အောင်မသုံးရ။ အဖေ့ဘုတ်အုပ် ထဲလဲ မသွားရ။ အကျယ်ဂျုပ် ကျနေသလိုဘဲ။ ရွာထဲဆိုဒါတော့ ဝေးရော… ဟီးဟီး..ဒါလဲခပ်ကောင်းကောင်း အဲဒီဒုံးက ရွာထဲလဲ ပွဲကြမ်းနေသလားလို့…
ပြောပြချင်တာက မိုးလင်းမိုးချုပ် အဲဒီ့သုံးခုဂျီးကိုပဲခေါင်းထဲထဲ့ထားရဒါ။ အခု နှစ်ခုလောက်လဲ ပြတ်သွားရော လူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ နဲနဲ ရူးကြောင်ကြောင် ပြောမလား။ I lost my mind ကို တိုက်ရိုက်ကြီးပြန်လိုက်တော့ ငါ့စိတ်ပျောက်သွားဒယ်ပေါ့နော်။
ဘာကိုမှအာရုံစိုက်လို့မရတော့သလိုဖြစ်သွားတာ။ သူများတွေ ဘေးနားက လာပြောနေတာ ကြားတယ်။ ခေါင်းထဲမ၀င်ဘူး။ အဲလိုပဲ စာဖတ်လဲ ဖတ်တာပဲရှိတာ ခေါင်းထဲဘာမှရောက်မလာဘူး။ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ဘလာကြီးလိုဖြစ်နေတာ။ တခြားသူတွေဖြစ်ဘူးလားတော့မသိဘူး….
ကူညီကြပါဦး။ ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုဒါရယ် နောက်တစ်ခေါက်ဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုဒါရယ်ပါ….
သေသေချာချာ ရှင်းပြမလို့လုပ်နေတာ အပေါ်နားက နှုတ်ခမ်းလေးလှုပ်နေတာကြည့်ပြီး ငေးနေမိတယ်။ အတွေးကလဲ ဘာတွေဝင်လာတယ်မသိဘူး။ ဘာပြောရမှန်းလဲ သိတော့ဘူး။ပြောမယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုတောင် ပျောက်သွားတယ်။ဟီးးးးးးးးးးးးးး
ဇောက်ထိုးကြည့်မိလို့လားဟင် …. ဘာပြောရမှန်းမသိတော့တာ…
ဒဂျီးက တစ်ဆယ်မပေးဒေါ့ဘူးကြားတယ်နော်… မီးမလာတုံးကတော့ ဖယောင်းတိုင်တွေ ထွန်းပြီး လမ်းထွက်ကြဒါပဲ… ခု ဘာလုပ်ကြမလဲ
ဦးပေ ထိပ်ခေါက်ဆိုပြီး ပြောင်ပြနေတော့….
ဒီလို အချိန်မှာ တရားမှတ် တရားထိုင်
စိတ်ထဲမရောက်ပေမဲ့လဲ ဘုရားစာ တခုခု ကို ရွတ်နေတာ အကောင်းဆုံးပါ..
အင်းတရားထိုင်ပြန်တော့လဲ မှတ်မရ… အလုပ်တွေကမပြီး… ကျန်းမာရေးကမကောင်း… ဟင်း… ကြုံဖူးမှသိမယ်နော်….
အဲ့လို အိပ်ဖို့ ကို အချိန်လုနေရတာ ဇွန်ဖြူရေ…
စာအုပ်ထုတ်ဝေခ တ၀က် ရှယ်ယာပါမလားဟင်င်င်…
မမြတ်မှာတော့မပူနဲ့ ရွာသူားတိုင်းမ၀ယ်နေရလို့ ဒဂျီးကို ဘီယာနဲ့နွားကင်ကျွေးပြီး စည်းရုံးလိုက်
ညအိပ်ခါနီး သီချင်းခပ်တိုးတိုးလေး timer ပေးဖွင့်ပြီး အိပ်ကြည့်လေ။ ဆွေးဆွေးလေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးတွေ ပေါ့။
မယ်ပုရေ အဲလိုဂျီးတော့ လုပ်သားအေ့ … ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ သူရဲခြောက်လိုက်သလို မပြီးနိုင် မစီးနိုင်ဒွေက ခေါင်းထဲဝင်ဝင်လာတော့….
သများ သားသမီးတွေများ အားကျလိုက်ထှာ…..
အိုင်လော့စ်မိုင်မိုင်းကို အားမကျချင်ပါနဲ့ကွယ်… ညီးကြုံဖူးမှသိမယ်
ဘာမှလဲလုပ်လို့မရ အိပ်ဖို့လဲအချိန်မရှိနဲ့ ကျမဆိုရင်တော့
wow ရယ် တဂျီးတချယ် မရရင်နေပါစေ ရင်မခုန်ပါဘူး wow အနမ်းလေးတွေနဲ့ ရင်င်င်င်တွေ ခုန်န်န်န်န်ပြီးးးး အနော် တွားတော့မယ်နော်
ရင်ခုန်ပြီး တောကသူတွေမှာတာမေ့မသွားနဲ့နော်။ ပြန်ရင်အရိုက်ခံနေရမယ်
အင်.းးးးးးစိတ်အရင်းအတွေးများနေလို့ နေမှာပါ။
ဒီအတိုင်းဘဲ နေလိုက်ပါ။ စိတ်အပန်းပြေဖို့ ကြိုးစားရင်း ပိုပင်ပန်းနေအုံးမယ်
ဖတ်နေရင်းနဲ့ နာပါ ရူးချင်သလိုလိုဖြစ်သွားတယ်……။ ဒါကြောင့် လစ်ပီနော်………တာ့ တာ။
ဟေ့ နေဦးလေ အကြွေးပေးသွားဦးလေ…